Unesifiso sokushada abe nezingane uZozi
UNESIFISO sokuba nomyeni nezingane ngelinye ilanga uZozibini Tunzi obenguzime wakuleli othandwa umhlaba wonke. Isithombe: INSTAGRAM/
Bongiwe Zuma | June 14, 2021
UKUBA ngowesifazane ophumelele nowenza umehluko emphakathini kuseqhulwini kuzime wakuleli oseyintandokazi yamazwe omhlaba kodwa nokuba umama wekhaya kusezinhlelweni zakhe.
UZozibini Tunzi obenguzime wakuleli noMiss Universe, ube nengxoxo ekhethekile naleli phephandaba kulandela ukubuya kwakhe phesheya, uthe njengawo wonke umuntu wesifazane uyafisa ukuqala umndeni ngelinye ilanga. Yize engathandanga ukukhuluma agxile ngezobudlelwane bothando kodwa ukubeke kwacaca ukuthi umshado ungezinye zezinhlelo zakhe eziphambili. UZozibini uthe njengawo wonke umuntu wesifazane uma ekhula kunezigaba zempilo adlula kuzo nasuke esezibheke ngabomvu, umshado kuyena ngezinye zezinto azifisayo empilweni.
"Ngiyazibona ngishada ngelinye ilanga ngiba nezingane. Ngingajabula ukuba nezingane ezimbili. Ngihlala ngibatshela nabantu ukuthi ngolamanisa ngoba ngifuna ingane yami ibe nomuntu ezodlala naye ngakho ezimbili zingilungele. Noma ikanjani ngiyafuna ukushada noma ngingeke ngikwazi ukusho ukuthi nini," kusho uZozibini.
Kuzokhumbuleka ukuthi kubona bonke ozime, uZozibini uphathe isicoco sikaMiss Universe isikhathi eside njengoba kube izinsuku eziwu-467. Lesi sipiliyoni asithole ngalezi zinsuku ufisa ukusigcina asisebenzise nakwezinye izinto ezizotshala imbewu ezoba nezithelo ezinhle entsheni.
"Okukhulu kakhulu engikufundile, ukulinda njengoba ngingene kunobhubhane nokuyinto esifundise khona iCovid-19. Ukuba yingxenye yezinhlelo ezidinga ngingenelele ngibeke uvo lwami ngezimo ezenzeka emhlabeni nokuyinto engingakaze ngiyicabange, kungithobise kakhulu. Ziningi nezinhlelo engibe yingxeye yazo ukucwaswa kwabantu nezithinta iLGBTQ nokungifundise izinto eziningi," kusho uZozibini.
UNESIFISO sokuba nomyeni nezingane ngelinye ilanga uZozibini Tunzi obenguzime wakuleli othandwa umhlaba wonke Isithombe: INSTAGRAM
Ebuzwa ngomculo uthe ngezinye zezinto ezisondele kakhulu enhliziyweni yakhe angafisa ukuzama abone kumubekaphi kodwa akasho ukuthi usekulungele ukukhipha i-albhamu. Baningi odoli esebenziwe abantu ngaye kodwa yena uveze ukuthi ubengakabi nowakhe othi yena nokuyinto engamjabulisa ukuzenzela ngelinye ilanga.
Eqhuba uthe ukwesekwa akuthole kubantu kuyamangaza ngoba noma wayekulindele ukwesekwa eNingizimu Afrika kodwa uthando aluthole kwamanye amazwe kuyammangaza. Ziningi izinhlelo azibandakanye kuzo nazoziqala. Lokhu ukwenza ngothando lokusebenza ngabantu nentsha nezinto ezithinta bona ngqo.
Ephetha uthe uyafisa izingane zamantombazane ezisakhula nezifisa ukufeza amaphupho azo ziyibuke impilo ngeso lokuthi konke kuyenzeka noma ngabe uzalelwephi.